Waaheen Media Group » Maraaxilka Ay Marto Diyaarinta Iyo Ansixinta Miisaaniyadu Somaliland
Browse:Home Articles Maraaxilka Ay Marto Diyaarinta Iyo Ansixinta Miisaaniyadu Somaliland	Maraaxilka Ay Marto Diyaarinta Iyo Ansixinta Miisaaniyadu Somaliland
Comments Off on Maraaxilka Ay Marto Diyaarinta Iyo Ansixinta Miisaaniyadu Somaliland	Miisaaniyadi waa odoroska dakhliga iyo kharashka ku baxa qaranka sannad maaliyadeed gudihii
oo isu dheelitiran waxaana ay ka kooban tahay odoroska kharash ee ku baxaaya fulinta hawlaha
dawlada iyo odoroska dakhli ee la filaayo inuu ka soo baxo ilaha kala duwan ee dhaqaalaha
Miisaaniyadu waxa ay kaga duwan tahay Mashaariicaha kale waxa soo jeedinteeda iyo
diyaarinteeda iska leh xukumada oo kaliya, waxa dhaqan-galkeedu ku xadidan yahay sannad
maaliyadeed kaliya, mooshin kuma soo jeedin karaa golaha wakiiladu diyaarinteeda iyo wax ka
badelkeeda, waxa ansixinteeda iska leh golaha wakiilada.
Haddaba haddii aynu isla garanay miisaaniyada iyo waxa ay tahay sidee loo dajiyaa
Sida uu qeexaayo qodobka 6aad ee xeerka miisaaniyada qaranku wasiirka maaliayada ayaa
isagoo ka qiyaas qaadanaya lixda bilood ee hore ee sanadka iyo sanadkii ka horeeyey, wuxuu ku
dhawaaqayaa 1‐da july siyaasada guud ee miisaaniyada qaranka
 Wasaarad waliba iyo hay’ad‐waliba waxay u soo gudbinaysaa 15 july barnaamijkeeda
siyaasadeed, qorshaheeda iyo meelaha ay mudnaanta siinayso guddiyada golaha ee ay
wada shaqaynta leeyihiin.
 Guddiyada golaha wakiilada iyo wasaaraduhu waxay ka yeelanayaan dood iyo falaqayn,
waxayna guddi‐waliba warbixinteeda u gudbinaysaa guddida u qaabilsan miisaaniyada
golaha (golaha wakiilada) ugu danbayn 5 august.
 Guddida miisaaniyada ee goluhu waxay isku geynaysaa dhamaan warbixinadaas,
waxayna u gudbinaysaa shirgudoonka mudo aan ka badnayn 10 maalmood, iyadoo
gudoomiyaha goluhuna u gudbinayo madaxweynaha talooyinka iyo warbixinaha oo ay ku
dhan‐yihiin wixii ay ka doodeen guddiyada, wasaaradaha iyo hay’adaha kale ee dawlada
ugu badnaan 7 maalmood.
 Madaxweynuhu marka uu helo talooyinka golaha wakiilada waxa uu si toos ah ugu
gudbinayaa wasaarada maaliyada, si ay ugu darsato qorshaha odoroska miisaaniyada.
Talaabooyinkaasi oo dhan marka laga qaado lana xaqiijiyo intaasi ka dib waxa loo gudbaa
diyaarinta miisaaniyada waxaana sida uu dhigayo qodobka 7aad ee xeerka miisaaniyada qaranku
waxa Ooroska miisaaniyada diyaarinaya Wasaarada maaliyada, iyadoo ka duulaysa awooda
dhaqaale ee dalka..
 Wasaaradu marka diyaarinayso (Gudbiyaan) odoroska miisaaniyada waxay ka
dalbanaysaa maamul (Institution) kasta oo qorshe miisaaniyadeed u gaar ah leh in ay soo
gudbiyaan qorshaha kharashkooda ee sanad miisaaniyadeedka soo socda.
 Wasaaradu marka ay dhamaystirto nuqulka hordhaca ah ee miisaaniyada oo u qaabaysan
si waafaqsan xeerka miisaaniyadda, xeerarka maaliyadda iyo xisaabaadka dalka, waxay u
gudbinaysaa Golaha Wasiirada si uu u ogolaado ugu danbayn 30ka September.
 Golaha wasiiradu markuu derso odoroska miisaaniyada hordhaca ah ee wasaarada
Maaliyadu soo gudbisay, waxay ku samaynayaan deraasad in ay sharci ahaan iyo qaab
ahaan dhamaystiran tahay.
 Golaha wasiiradu marka uu saxo wixii khaladaad ama madmadaw ku jira miisaaniyada
go’aana ka gaadho wixii cabasho ah, wuxuu nuqulka uu ansixiyay ee odoroska
miisaaniyada u gudbinayaa Golaha Wakiilada ka hor 31ka Oktoobar.
Miisaaniyadu marka ay ka soo gudubto golaha wasiirada waxa ay uga sii gudubtaa golaha
wakiilada oo iyaguna ka guta waajibaadka uu dastuurku ka siiyey waxaana sida uu qeexaayo
qodobka 13aad ee xeerka miisaaniyada qaranku, miisaaniyada hordhaca ah waxa loo baahan
yahay in ay golaha ku timaadaa go’aanka Golaha Wasiiradda, ka dib marka ay Golaha
Wasiiradu soo ansixiyaan.
 Wasiirka maaliyadu wuxuu ka hor akhriyaya fadhiga Golaha Wakiilada warbixintiisa
miisaaniyada uu ku lafa gurayo xaalada guud ee dhaqaalaha dalka wuxuuna si fiican uga
3. Hadhaa (surpluse)
4. Daymaha (loans)
5. Deeqaha (grants)
6. Cashuur dhimis haday jirto
7. Macluumaad kasta oo miisaaniyada la xidhiidha.
8. Mashaariicda horumarineed.
 Marka warbixintu dhamaato mudanayaashu waxay waydiin karaan wasiirka wixii su’aal
ama waxay ka dalban karaan xogaha kale ee ay uga baahdaan miisaaniyada.
Sida uu qeexayo qoddobka 10-aad ee xeerka miisaaniyadu qaranku marka golaha wakiilada
loo gudbiyo miisaaniyada qaranka waxa la raaciyaa lifaaqo iyo warbixino faahfaahsan oo ku
saabsan miisaaniyada iyo qaybaha ay ka kooban tahay waxaana ka mid ah waxyaabaha lagu
 Warbixin faahfaahsan oo ku saabsan macluumaad kasta oo la xidhiidha dakhliga iyo
 Sababaha korodh kasta ama dhimis kasta oo dhakhli ama kharash.
 Siyaasad maaliyadeed ka (financial policy) ee xukuumadda ee sannad maaliyadeedkaas
 Warbixinta Daymaha qaranka iyo faahfaahintooda .
 Marka miisaanyadu golaha soo gaadho shirgudoonka goluhu wuxuu mudo aan ka
badnayn 14 maalmood ku diyaarinayaa go’aanka ansixinta miisaaniyada, sida uu
dhigaayo qodobka 19aad ee xeerka miisaaniyada.
 Haddii guddiyada ku shaqada leh arrimiha miisaaniyadu ay talooyin soo jeediyaan
shirgudoonku waxa uu mud 14 maalmood gudahood ah madaxwaynaha u
 Marka golaha wakiiladu ansixiyaan miisaaniyada, madaxwaynuhu waxa uu soo
saarayaa go’aan uu ku dhaqan galinaayo ansixinta miisaaniyada.
Cod u qaadista Golaha Ee Miisaaniyada
Qodobka 17aad ee xeerkan oo ka hadlaaya ansixinta miisaaniyada waxa uu dhigayaa cod u
qaadista miisaaniyada waxa loo raacayaa soo jeedimaha mudanayaasha, kaas oo ay ka mid ahaa
1. In sideeda loo ansixiyo odoroska miisaaniyadda.
2. In kaabis iyo wax ka badal lagu sameeyo odoroska miisaaniyadda.
3. In aqlabiyad ku celiyo gebi‐ahaan. Haddii Goluhu ku ogolaan waayo aqlebiyada
4. Haddii goluhu ku ogolaan wayo cod hal dheeri ah in miisaaniyadda la celiyo
waxay miisaaniyadu ku ansaxaysaa sidii xukuumadu ku soo gudbisay.
5. Guddoomiyaha Goluhu wuxuu cod gelinayaa soo jeedinta leh aqlabiyadda
doodda mudanyaasha iyo diidmadeeda.
Xisaab Xidhka Miisaaniyada
 Miisaaniyad sanadeed kasta xisaab xidhkiisa waxaa xukuumadu soo gudbinaysaa
Golaha Sida ku cad Qodobka 55aad, Faqrada 6aad ee Dastuurka.
 Guddida ku shaqadaleh miisaaniyada marka uu dhamaystiro deraasadooda iyo
xogtooda, wuxuu Golaha ka horjeedinayaan warbixin talooyin xambaarsan oo la
xidhiidha sida miisaaniyada loogu dhaqmay iyo dhaliilaha uu lahaa ku
 Goluhu xisaab xidhka wuu ansixin karaa ama wuxuu ku celin karaa
Hanti‐dhawrka isagoo talooyin iyo tilmaamo raacinaya si loo soo saxo amba loo
qabyo‐tiro Mudo 45 maalmood gudahood ah. Sida uu dhigaayo qodobka 31aad ee
xeerka miisaaniyada qaranku.
Guddida Miisaaniyada Ee Heer Qaran:-
1. Wasiirka wasaaradda maaliyada
2. Wasiirka duulista hawada
3. Wasiirka hawlaha guud
4. Wasiirka beeraha
5. Wasiirka xanaanada xoolaha
6. Wasiirka ganacsiga
7. Gudoomiyaha rugta ganacsiga
Xeerka miisaaniyada qaranka ee XEER NO. 44/2010 iyo qodob ka mida dastuurka
jamhuuriyadda Somaliland ee la ansixiyay sannadkii 2001.